नेपालमा ल्यापटपको खपत वृद्धि, ७ अर्ब ७२ करोड बराबरको ल्यापटप आयात - Baikalpikkhabar
नेपालमा ल्यापटपको खपत वृद्धि, ७ अर्ब ७२ करोड बराबरको ल्यापटप आयात
काठमाडौं, भदौ ८/ नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा रू. ७ अर्ब ७२ करोड बराबरको ल्यापटप आयात भएको छ ।
बन्दाबन्दी सृजित नयाँ वातावरणका कारण नेपालमा ल्यापटपको खपत वृद्धि भएको छ । अनलाइन कक्षा तथा जूम सम्मेलनको बढ्दो प्रवृत्ति, सरकारी सेवाहरूमा पनि अनलाइन संस्करणको बढ्दो अभ्यास तथा सूचना प्रविधिमैत्री समाजका कारण नेपालमा ल्यापटपको आयात बढेको हो ।
नेपालले आयात गर्ने ल्यापटपमध्ये करीब ९३ प्रतिशत चीनबाट हुने गरेको छ भने अन्य प्रमुख स्रोत मुलुकहरूमा मलेशिया, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्डोनेशिया, जापान रहेका छन् । ल्यापटप आयातबापत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रू. ९९ करोड २६ लाख ७० हजार बराबरको राजस्व पनि उठेको छ ।
नयाँ ल्यापटप किन्दै हुनुहुन्छ ?
मङ्गलबार, ०८ भदौ, २०७८, बिहानको ०७:४९ बजे